Tilmaanta software soo kabashada xogta iyo tillaabooyinka-4 - [How to recover by 3 step]
Marka faylasha ayaa laga tirtirayaa qashinka dib loo isticmaalo? Faylka ma laga soo kaban karaa?
Sidee loo soo celiyaa feylasha laga tirtiray qashinka dib-u-warshadaynta? Haddii faylka aad ka tirtirto qashinka dib-u-warshadeynta, ma soo celin kartid faylka iyada oo loo adeegsanayo qashinka dib-u-...
Disk-ga la saari karo lama furi karo, sida loo soo celiyo xogta?
Maxaan sameeyaa haddii diskooga diskiga ah aan la furi karin? diskiga la saari karo waa qalab aad u caadi ah.Haddii diskka la qaadi karo aan la furi karin, xogta ku jirta diskka ayaa noqon doonta mid ...
Sida loo soo celiyo feylasha laga tirtiray qashinka qashinka
Maxaan sameeyaa haddii aan doonayo in aan soo celiyo feylasha la tirtiray ee qashinka dib loo warshadeeyo? Sidee looga soo kabanayaa feylasha laga tirtiray qashinka dib loo warshadeeyo? Macluumaadka w...
Dib-u-soo-nooleynta Macluumaadka 'Recycle Bin Data Recovery 'pp Haddii aad si shil ah u faaruqiso Recycle Bin, sidee ayaad u soo celin kartaa xogta? Xaqiiqdii, xogta ku jirta qashinka dib-u-warshada...
Sidee looga soo kabanayaa feylasha laga tirtiray qashinka dib loo warshadeeyo?
Sidee loo soo celiyaa feylasha laga tirtiray qashinka dib loo warshadeeyo? Sidee dib loogu soo celiyaa qashinka burburay? Sidee looga soo kabanayaa feylasha laga tirtiray qashinka dib loo warshadeeyo?...
Dib u hel faylasha tirtiray
Tirtirka faylka ayaa ah mid aad u fudud oo aad u aasaasi ah isla mar ahaantaana, tirtirka faylka sidoo kale waa mid ka mid ah howlaha maalinlaha ah ee lama huraanka ah. Bacdamaa booska kaydinta kombiy...
Nooc software ah oo soo kabasho adag ah
Maxaan sameeyaa haddii aan qaabeeyo diskga adag, diskiga adag ee laga saari karo, diskiga U ama kaarka xusuusta si qalad ah? Xogta qaabaysan ma laga soo kaban karaa? Tababbarka Qaab-celinta Qaab-dhism...
Habka dib u soo kabashada
Soo kabashada Qaybtii, isticmaal Bplandatarecovery si aad uga soo kabato xogta asalka asalka ah daqiiqado gudahood Maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa waxqabadka soo kabashada Qeyb ka mid ah Bplandat...
Qaybtii waa lumay soo kabashada xogta
Qaybta luminta xogta soo kabashada Ka dib markii kombiyuutarka diskiga ama disk adag ee mobilada cusub la iibsado ka dib, diskiga waa in loo qeybiyaa oo loo habeeyay. Nidaamka hawlgalka ayaa guud ahaa...
Waxa la sameeyo haddii qeybtu noqoto qaab RAW, soo kabashada xogta
Ka waran haddii qeybuhu u noqdaan qaab RAW? Qalabka kaydinta xogta ee loo adeegsado, macmiilku waxay la kulmi karaan dhibaatooyin qaarkood sababao kala duwan awgood markay adeegsadaan aaladaha, sida Q...
Soo kabashada xogta kumbuyuutarka
Soo kabashada xogta kombiyuutarka Kombiyuutarka waa in lagu murmaa mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan shaqada hadda jirta, xaalado badan, kumbuyuutarradu si weyn ayey u fududeyn karaan waxya...
Disk wuxuu muujinayaa sida dib loogu soo celiyo xogta iyadoon qoondayn la sameyn
Maxaan sameeyaa haddii diskigu muujiyo meel aan degin? Maxaan sameeyaa haddii booska diskku uu noqdo mid aan la dejin? Maqaalkani wuxuu sharxayaa sida ugu habboon ee loo maareeyo meelaha diskiga aan d...
Disk-ka looma qaabaynin soo-kabashada xogta
Ka waran haddii diskku uusan qaabeysan? Sidee dib loogu soo ceshan karaa xogta muhiimka ah? Markaad isticmaaleysid disk adag, m disk U, ama kaarka xusuusta, waxaad inta badan la kulmaysaa dhibaatada i...
Ka soo kabashada xogta guud
Soo kabashada xogta guud iyo sida loo adeegsado Bplandatarecovery ee soo kabashada file Recovery Select "Recovery Recovery" oo guji "Bilow". Qaabkaas, softiweerku wuxuu baari doonaa qaybaha oo d...
Maxaan sameeyaa haddii U diskku uu kiciyo qaabeynta? Sida loo soo celiyo xogta diskiga U
Maxaan sameeyaa haddii U disk-ku uu kiciyo qaabeynta? Sidee loo soo ceshan karaa xogta? Qaab-dhismeedka diskka ah ee degdegga ah, sida loo soo celiyo xogta diskiga 'disk disk'? Bplandatarecovery waa b...
Sida loo isticmaalo kombuyuutarrada xogta kombiyuutarka ee loogu talagalay soo celinta xogta diskiga
Maxaan sameeyaa haddii xogtii U disk lumay? Keebaa u wanagsan barnaamijka kombiyuutarka 'disk disk data?' Sidee looga soo kabanayaa xogta kombiyuutarka 'disk disk'? Maanta, waxaan soo bandhigi doonaa ...
Qalabka dib u soo kabashada xogta kombiyuutarka si loo helo xogta lumay
Aaladda dib u soo kabashada xogta diskka U disk waa aalad inta badan loo isticmaalo kaydinta, laakiin marka aad isticmaaleyso diskka U, waxaa lagama maarmaan ah inaad la kulanto dhibaatada lumint...
Dhibaatooyinka caadiga ah iyo hababka soo kabashada ee xogta xoqga U disk ee ay waxyeeleeyaan fayras
Soo koobitaanka dhibaatooyinka caanka ah iyo qaababka dib u soo kabashada ee xogta dib u soo kabashada U disk Sidee loo soo ceshadaa xogta disk luminta? Wax dhib ah maleh shaqada ama nolosha, U di...
Sida loo soo ceshado xogta ka dib qaabaynta U disk
Soo kabashada xogta diskka Maqaalkaan, waxaan kaagala hadli doonaa habka 'disk disk data U' si aan kaaga caawiyo inaad hesho disk-ga U maxaa yeelay lama tirtiri karo, ma qaabayn karo, mana qeybi...
Sidee dib loogu soo celiyaa feylasha uu tirtiray diskiga U?
Sidee loo soo celiyaa feylasha laga tirtiray diskka U? Faylasha loo tirtiray diskka U looma gelinayo qashinka dib loo warshadeeyo laakiin si toos ah ayaa loo tirtiri doonaa. Xaaladdan oo kale, faylash...
Maxaan sameeyaa haddii faylasha kujira diskka USB ay ka maqan yihiin? Sidee loo soo celiyaa xogta di
Maxaa dhacaya haddii disk-ga U oo leh xog muhiim ah si lama filaan ah aan loo furi karin? Xogta USB-ga ma laga soo kaban karaa? Maanta, waxaan ku siin doonaa hordhac faahfaahsan oo ku saabsan xalka sa...
Maxaan sameeyaa haddii drive USB-ka aan la furi karin? Sidee dib loogu soo ceshadaa xogta diskiga U?
Maxaan sameeyaa haddii drive USB-ka aan la furi karin? Sidee dib loogu soo ceshadaa xogta diskiga U? Casharkan wuxuu isticmaalaa nooca tijaabada ah ee bilaashka ah ee barnaamijka soo kabashada xogta e...
U disk ma furi karo qaabeynta deg degga ah, sida loo soo celiyo xogta?
Maxaan sameeyaa haddii USB-ga USB-ga uu ku guuldareysto inuu furo oo isla markiiba qaabeeyo? Sidee loo soo ceshan karaa xogta ku jirta U diskka? Dhibaatada qaabaynta marka USB-ga USB-ga aan la furi ka...
Soo kabashada xogta kaydinta kombiyuutarka
Qalabka keydinta mobilada USB waa kala duwan yihiin waxayna leeyihiin meelo keyd ah oo kaladuwan si ay u buuxiyaan baahiyaha isticmaaleyaasha kaladuwan, sidaa darteed waxay leeyihiin saldhig weyn oo i...
Maxuu u luminayaa xogtii kaadhka SD ahayd
Kaararka SD waa mid ka mid ah aaladaha keydinta xogta inta badan la isticmaalo, oo badanaa loo isticmaalo keydinta xogta muhiimka ah sida sawirada, fiidiyaha, iyo maqalka. Si kastaba ha noqotee, xogta...
Sida loo soo celiyo xogta lumay kaarka SD
Kaarka SD wuxuu lumiyaa xogta waqti ka waqti .. Haddii aad la kulanto macluumaad lumis, waxaad ubaahantahay inaad walwasho .. Waxaad si fudud u soo ceshan kartaa dhamaan noocyada xogta ka luntay kaark...
Sida loo soo celiyo kaadhka SD ee xogta qaabaysan
Sidee loo soo ceshadaa xogta ka dib qaabaynta kaarka SD? Talooyinka soo-kabashada xogta kaarka SD-ka ee wadaaga Markaad caadi u isticmaasho SD, waxaad had iyo jeer la kulantaa dhibaatada qaabaynta ...
Soo kabashada xogta RAID
Soo kabashada xogta RAID - shaqada xoogga leh ee Bplandatarecovery Soo kabashada xogta RAID, aragtida guud, badanaa waxay u muuqataa mid aan la saadaalin karin, sida haddii khubaro ku xeel dheer so...
Qaybinta barnaamijka soo-kabashada xogta FAT
Ku dhawaad ​​isticmaale kasta wuxuu la kulmay xanuunka ka lumay xog, xogta waxaa laga tirtiri karaa qalad ama qaab ama lumisay. Laakiin dad yar ayaa sifiican ula tacaali kara khasaaraha xogta isla ...
Ka soo kabashada xogta BitLocker oo loo qeybiyey qeyb qarsoodi ah
Soo kabashada xogta BitLocker oo qeyb ka ah nidaamka qarsoon, horudhaca astaamaha Bplandatarecovery Qeyb ka mid ah nidaamka hawlgalka ee taxanaha Windows-ka ee ilaaliya amniga xog...
Dib ugu soo celi xogta xogta soo kabashada
Sida aan wada ogsoonahay, nidaamka hawlgalka ayaa gaabinaya muddo dheer kadib, maxaa yeelay barnaamijka ku rakiban nidaamka, qiimayaasha diiwaangelinta dib-u-dhaca, xogta ku-meel-gaarka ah, qashinka, ...
Sida loo soo ceshado xogta haddii qeybtii Ghost ay weydo oo kaliya C drive-ka ayaa haray
Isticmaalayaasha badanaa waxay sameeyaan qaladaad marka ay u isticmaalayaan Ghost sida nidaamka, iyagoo sababaya diskka adag inuu noqdo C drive, qeybaha kale ee diskiga hore ayaa lumay, taasi waa, dis...
application de récupération de photos android2020-04-01
ubuntu meilleur logiciel de récupération de données2020-04-01
Logiciel gratuit de récupération de données de téléphone Android2020-04-01
Outil de récupération de données professionnel2020-04-01